Karaman’ny mpiasam-panjakana : Nasondrotry ny Filoham-pirenena 8 % -
AccueilRaharaham-pirenenaKaraman’ny mpiasam-panjakana : Nasondrotry ny Filoham-pirenena 8 %
Fanomezana maha-po, izay no azo ilazana ny fanapahan-kevitry ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina manoloana ny fahatongavan’ny fetin’ ny asa omaly, fisondrotan’ny karaman’ ny mpiasam-panjakana ho 8 % no nitsena ireo mpiasam-panjakana rehetra. “Noho izany, ny mari-karama farany ambany eo amin’ny sehatra tsy miankina dia efa nasondrotra vao tsy ela izay, fa mitodika amin’ny mpiasam-panjakana kosa ny Filoham-pirenena androany manambara aminareo fa asondrotra 8% ny mari-karaman’ny mpiasam-panjakana manomboka ny volana Mey izao”. Ankoatra io fanomezana ho an’ ny mpiasam-panjakana io dia nirary soa feno ny mpiasa rehetra ihany koa ny filoham-pirenena malagasy amin’izao ankatoky ny fetin’ ny asa izao. “Mitodika manokana amin’ny mpiasa malagasy rehetra manerana ny Nosy aho, na eo amin’ny sehatry ny asam-panjakana na ny tsy miankina, amin’izao ankatoky ny voalohan’ny volana mey izao. Faly miarahaba anareo aho amin’izao fankalazana ny fetin’ny asa izao, satria sady mampiaina sy mamelona ny isan’ankohonana ianareo no miantoka ny fihariana sy ny toe-karen’ny firenena ihany koa”.
Amin’ izao vanim-potoana izao ihany koa dia efa samy manana ny lanjany, ary mandray andraikitra amin’ izany asa izany ihany koa ny vehivavy, noho izany dia nisy ny teny izay natsipin’ ny Filoham-pirenena manoloana izany “Ny asa no maha-rangahy hoy ny fitenenana, kanefa raha ny vanim-potoana ankehitriny, dia mila ahitsy izany fomba fijery izany noho ny anjara biriky mavitrika entin’ny vehivavy, tsy ao an-tokantrano ihany, fa eo amin’ny seha-pihariana rehetra, koa tsy ho diso isika raha hampivoatra ny fijery ka hiteny hoe : Ny asa no maha-olom-pirenena !” hoy hatrany ny Filoham-pirenena . Fa ankoatra izay dia nilaza ihany koa ny Filoham-pirenena fa tsy misy asa ambany izany fa rehefa asa dia samy mitondra mankany amin’ ny fampandrosoana avokoa. “Tsy misy asa ambony sy ambany fa samy manana ny lanjany sy hasiny avokoa ny asa rehetra : na mpamboly sy mpiompy ianao, mpanjono ianao, mpanao asa tanana ianao, mpanampy an-trano ianao, mpitatitra ianao, mpitsabo ianao, injeniera ianao, mpiasam-panjakana ianao, mpitandro filaminana ianao, mpiasan’ny asa vaventy sy ny tao-trano ianao, mpikirakira ny teknolojia avo lenta ianao, mpanao gazety ianao, miasa tena ianao, sns… Ny fitambaran’ny vokatra entin’ny tsirairay no mifameno mitondra ny fampandrosoana faobe.
Manoloana izay fanondrotana ny karaman’ ny mpiasam-panjakana, dia nanamarika ny filoham-pirenena fa mahalala ny manjo ny mpiasa ny tenany, ary mihaino ihany koa ny hetahetan’izy ireo manoloana ny antso izay atao. “Etsy andanin’izany, ny Filoham-pirenena sy fitondram-panjakana izay tarihiko dia mahafantatra, mihaino, mandinika ny hetahetanareo, ary manome vahaolana araka izay azo tanterahina. Miangavy aho ny hitandroana ny maha-Malagasy, ka hifampitondrantsika toa ny Ray aman-dreny sy zanaka : raha misy ny tsy mampitovy hevitra dia tsy misy afa-tsy ny fifampidinihana sy fifanakalozan-kevitra no ahavitana mamaha olana”. Ka noho izany hoy ny Filoham-pirenena dia tokony ho mpirahalahy mianala ny rehetra ahafahana tonga amin’ny fampandrosoana ny firenena “Ataovy toa ny mpirahalahy mianala isika, ka izaho Filoha Mpitarika ny Fitondrana sy ny Fanjakana manontolo tokinao, ary ianareo mpiasa kosa no tokinay : ”Ankohonana iray ihany ny Firenena”.